Maalinta ka hortaga ganacsiga dadka oo laga xusay dunida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sanad walba maanta oo kale waxaa caalamka laga xusaa maalinta ka hortagga ka gancsiga dadka (Worl day Against trafficking) oo sanadkii hore 2013 golaha guud ee Qaramada Midoobay ay u asteeyeen in sanad walba la xuso 30-ka bisha July.
Qiyaas ahaan 2.5 Milyan oo qof oo ku nool dunida ayaa la kulma gumeysiga dadban ee ka ganacsiga dadka, rag dumar iyo carruur ayaa u gacan gala kuwa ka ganacsada dadka, haddii ay noqon laheyd gudaha dalkooda ama dibadda.
Hay’adda socdaalka Adduunka (IOM) warsaxafadeed ay maanta soo saartay ayay ku sheegtay in loo baahanyahay in leyska kaashado sidii looga hortagi lahaa ka ganacsiga ama dhoofinta dadka, iyadoo si khasab ama qiyaano ah lagu kaxeynayo, taasoo ay ka faa’idayaan kuwa howshaasi kujira.
Barnaamijka ka hortagga ka ganacsiga dadka ee hay’adda socdaalka adduunka (IOM) ee Soomaaliya, waxaa maalgaliya dowladda Japan iyo midowga Yurub.
Maamulaha hay’adda socdaalka adduunka u qaabilsan barnaamijka ka hortagga ka ganacsiga dadka ee Soomaaliya Hiroko Nishono ayaa sheegay in intabadan dadku ay ka hadlaan dhibaatooyinka kale,balse loo baahan yahay in sidoo kale laga hadlo xal u helidda ka ganacsiga ama tahriibinta dadka, dowladduna ay maxkamadeyso kuwa ka shaqeeya howlahaas.
Wuxuu tilmaamay in IOM ay sii wadi doonto wadashaqeynta ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, maamullada kajira dalka iyo cid kasta oo gacan ka geysaneysa ka hortagga ka ganacsiga dadka.
Cali Cabdi madaxa hay’adda socdaalka adduunka ee Soomaaliya ayaa sheegay in dambiilayaasha ka shaqeeya ka ganacsiga dadka ay ka faa’ideystaan dad nolosha ka quustay iyo kuwa doonaya inay noloshooda wax ka baddelaan, kuwaasoo la kulma dhibaatooyin kala duwan.